Maitiro ekuita chokwadi chekuti rako rekuburitsa rinoverengwa nevanhu kwete marobhoti?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Maitiro ekuita chokwadi chekuti rako rekuburitsa rinoverengwa nevanhu kwete marobhoti?
avhiyesheni • Hawaii Kupwanya Nhau • nhau • Press zvinoburitswa • Technology • Trending Now • Akasiyana Nhau
Uri kubatika here kana uchipa kuburitswa kwenhau? Nepo iyo PR agency yakanyorera yakanaka midhiya kuburitswa, ruzhinji rwemasangano vanongoburitsa kuburitswa kune yayo runyorwa rwe media midhiya, vachitarisira kuburitswa kwemahara. Izvi ndizvo zvinodaidzwa neindasitiri "Earned Media." Kune rimwe divi, "Paid Media" inopa avo vanotenderera kuburitsa kwavo kuzere kutonga kwako kwekumaka nekutumira mameseji. eTurboNews akawedzera mamwe mazinga maviri pairi, uye zvinoreva kubhadharwa chete zvichibva pakubudirira.
Kutenderera kuburitswa kwemabhizimusi ibhizimusi hombe, asi zvinyorwa zvakaita se eTurboNews kazhinji haisi parutivi rwekuwana mari iyi yekuita bhizinesi,
Mahombe ekuparadzira waya masevhisi sePR Newswire anobhadharwa kutenderedza kuburitswa kune pulication, uye panguva imwe chete iri kubhadharisa marezenisi emari kuzvinyorwa zvakakosha.
Nguva zhinji midhiya inoburitswa inopera pamapeji akavanzika ekumashure ezvivakwa senge Yahoo Mari, Bhizinesi Chinyorwa, uye inogadzira mishumo inonakidza mukufungidzira huwandu hwevaverengi vanogona
eTurboNews ikozvino iri kuve nechokwadi, kuti vaverengi vezvokutengeserana venhau vanoburitswa vakaburitswa pane eTN portals ivo chaivo vanhu uye kwete marobhoti.
Paunenge uchiongorora mishumo yekuparadzira yezvakatumirwa zvinoburitswa nemamwe waya masevhisi, munhu anogona kuwana macomputer achitaurirana. Iyo kambani inotumira kuburitswa kazhinji inogamuchira mishumo ine mamirioni-akasimba manhamba apo muchokwadi chete mazana mashoma murume akaona nyaya yakaburitswa mune yepamutemo bhuku. Vashoma pane vashoma vanhu vakavhura uye verenga kuburitswa, zvichikonzera kungoita mashoma mashoma pane zvinongedzo zvakadzamirwa mune zvemukati zvekuburitswa.
Mutengo wekusunungurwa kumwe chete unogona kuenda kuzviuru nemhedzisiro shoma.
Midhiya yakawanikwa zvinoreva kushambadzira izvo chaizvo zvine vateereri vanodikanwa zvinowanzoitika parutivi rusiri kuwana rwecheni iyi. Iko kune kushomeka kushoma kwekuburitsa midhiya kuburitsa iyo inosanganisira yekushambadzira zvemukati.
eTurboNews inosvika kupfuura 2 miriyoni vaverengi vamwe mwedzi wega wega uye nekuuya ne win / win mhinduro: Vaverengi vevanhu!
eTurboNews itsva Unlimited Regedza Kutumira Zvirongwa vimbisa vatengi vanongobhadhariswa kana muverengi akanyatso kurudzirwa kuti avhure kuburitswa kwenhau, achiiverenga obva abaya link yaanofarira. Mazhinji ma link anoenda kumawebhusaiti ekambani anotumira.
Kana muverengi akangodzvanya pane iyi link, pachave nekubhadhariswa pakati pemasendi gumi kusvika ku $ 15 pakuki, zvichienderana nechirongwa. Mari yepamusorosoro haizombopfuuri 1.50 inobaya pakuburitswa.
Zviri mukufarira eTurboNews kumisikidza kuburitswa kwekushambadzira mushe, woiongorora kwemazwi akakosha uye misoro yezvinonhuwira, uye woiisa kune injini dzekutsvaga, nhau APPS, uye aggregator nhau dzemasevhisi, seGoogle News.
Ose mapepanhau achaburitswa muETN mubairo-unohwina wepasirese tsamba tsamba. Vaverengi vanopfuura miriyoni imwe chete vanogashira Push ziviso pakombuta yavo inoratidza musoro wekuburitsa une chinongedzo chenyaya.
Zvinyorwa zvinoburitswa zvakatumirwa pa eTurboNews zvinoshandurwa kuva odhiyo faira ndokutumirwa pa eTurboNews. Ichashandurwawo kuita Podcast.
Podcasts anoshandurwa kuita Livestream vhidhiyo uye yakatumirwa pane anopfuura mapuratifomu e16, kusanganisira YOUTUBE, APPLE, Soundcloud, Anchor, Google, nezvimwe.
Kuburitswa kuchadudzirwa mumitauro inodarika makumi mashanu uye inosanganisirwa pane itsva eTN, yakazvimirira uye yakazvipira mitauro yekune dzimwe nyika enhau.
Zvese izvi zvinoitwa nevanhu vane hanya kuti vazhinji vamwe vanhu pasi pano vanokurudzirwa kuverenga nekudyidzana nezviri mukati mezvinoburitswa mumapepanhau.
Idzo nhengo dzakanyorera kuzvirongwa zvisina muganho zvekunyorera zvinogashira pekutanga kutariswa kuti zvitaurwe mune iri kuuya nyaya dzekutungamira. Nhengo dzakadai dzinokokwawo kubvunzurudzo panhepfenyuro yezuva nezuva yeTV, kana semubatanidzwa kana muenzi panhaurirano dziri kuuya dzeLivestream.
Nhengo dzeUsingaverengeki Zvemukati Kutumira Subscripiton zvirongwa zvakare zvinogamuchira unogamuchirwa nhengo mu World Tourism Network (WTN).
More mashoko: www.travelnewsgroup.com/unlimited
Rumwe ruzivo nezvevanhu kudhinda-kuburitsa